Uchwepheshe we-Semalt: I-Google's Shield Project isiza ukubalekela ukuhlasela kusuka ku-Hackers
Abantu kufanele baqale ukuqaphela ukubaluleka kwamabhizinisi amakhulu. KuhleIsibonelo yilokho okwenziwa yi-Google kumlobi wezombusazwe owayeyisisulu sokuhlaselwa okukhulu kweDDoS. Le nkampani yangena futhi yakhipha ikhompyutha yayo eyingoziamandla okubeka le hack ekugcineni.
UBrian Krebs uyilungu le-blogger yokuphepha. Ukuhlaselwa kwaqala lapho evezaimikhuba emibi yebhizinisi yeqembu elilodwa, eliphinde liphindiselele ngokukhishwa kwe-DDoS (ukusatshalaliswa kokungafuni kwenkonzo) ohlelweni lwakhe.I-DDoS ayintsha njengoba abaduni bayisebenzisa njalo ngezikhathi ezithile. Kodwa-ke, leli cala lihlukile, futhi ukuphazamiseka kwakunamandla kunalokhonjalo. AmaKrebs avunyelwe ukuthi asebenzisana nokuhlaselwa kwe-DDoS ngaphambili, kodwa akukho lutho ngalolu daba.
I-Artem Abgarian, i i-Semalt Imenenja yePhasimende eMpumelelo enkulu, ikholelwa ukuthi isizathu salokhu ukuthi abaduni banezikhali eziningi kunanini ngaphambiliukufeza ukuhlaselwa kwabo. Okokuqala, izinhloso ezidume kakhulu zazingama-PC ama-Windows amadala. Babezobayala ukuba baqondise ugaxekileukuhamba esiteshini sesisulu ngenhloso yokugqekeza ngaphandle kokungaxhunyiwe ku-intanethi. Ngokwehlukahluka kwamadivaysi e-intanethi ku-intanethi, abaduni manje banaloamathuba amaningi okuwakhetha.
Esimweni sikaKrebs, abahlaseli basebenzisa ama-botnets ukuze baqale ukuhlasela. Bese-kekugqilaziwe ezinye ze-IoT (i-Inthanethi yezinto) amadivayisi we-blogger..Amakhulu amakhamera we-IP, ama-routers, namarekhodi evidiyo yedijithali,konke okukwazi ukufinyelela ku-intanethi. Iningi lamadivayisi abizwa ngamaphasiwedi abuthakathaka noma azinzima ukuwavikela ekungeneni.
Iwebhusayithi yeKrebs 'iyimithombo ebalulekile yolwazi kulabo abalaleli be-intanethi abavela kuyoumphakathi wokuphepha. Ukusebenzisa okukhethwa kukho okuhlukahlukene, njengoba kuboniswe ngenhla, bakwazi ukugoqa phansi isayithi, futhi baqinisekise ukuthiyahlala phansi kuze kube phakade. Ukuhlasela kwe-DDoS kusuka kubaduni kuyindlela entsha yokucwaninga. Ukuhlaselwa kwagcina ulwazi kuzilaleli.
Kuleli phuzu, umuntu angase azibuze ukuthi iGoogle ivumelana kuphi konke lokhu. Okukodwa kweIzibuyekezo zakamuva ezivela ku-Google ukuthi ziqalise i- "Project Shield". Isinyathelo sephrojekthi ukusiza izintatheli ezinjalonjenge-Krebs. Ibavimbela ekutholeni ukuhlaselwa kwe-DDoS kumawebhusayithi abo.
I-Project Shield inika umlobi wezintambo zayo amaseva ukuze bakwazi ukuyisebenzisa ukuze bayitholenoma yimuphi umgwaqo ononya oqondiswe kuwebhusayithi ngenhloso yokuwunqoba. Uhlelo aluzuzisi kuphela izintatheliukuwa isisulu sabaduni. Ukusetshenziswa kwalo kubuye kubuyele kulawo mazwe aphikisana ngokuphindaphindiwe kokuqukethwe kwabo ngokusebenzisa ukuhlaselwa kwe-DDoS kusuka kuboohulumeni.
Ekuqaleni, i-Krebs inkontileka inkampani eyaziwa ngokuthi ngu-Akamai ukuze inakekele okuqukethwe kwayo.Noma kunjalo, inkampani yokuphathwa kokuqukethwe ayikwazi ukukwazi ukuvikela iwebhusayithi kusuka ekuhlaselweni okukhulu okufana nale. Enye inkampaniutshele uKrebs ukuthi uhlobo lwe-Akamai olunikezwayo lwaluyodala cishe ku-$ 200,000 ngonyaka.
Ukusika indaba ende, ukuhlaselwa kwewebhusayithi yeKrebs kuyinkomba yeukubaluleka kwabantu kufanele bafake ekuvikelekeni kwewebhusayithi. Uma umuntu engasebenzisi i-Google ngale njongo, ezinye izinkampani zinikeza izinsizakalo ezifanayo.Ngokusebenzisa lokhu, abanikazi bewebhusayithi banciphisa ingozi yokuhlaselwa kweDDoS ngokuphawulekayo, njengoba abagadli manje basebenzise njengendlela yokucwaninga okunamandlaizikhali.